Walaaca laga qabo kulanka berri ee Golaha Shacabka | KEYDMEDIA ONLINE
Walaaca laga qabo kulanka berri ee Golaha Shacabka
Waxaa saacadihii u dambeeyay isa soo taraya walaaca laga qabo fadhiga ay berri Golaha Shacabka BJFS yeelanayaan, kaasoo Agenda -ha kulanka looga hadlayo lagu sheegay Caabuqa Covid-19.
MUQDISHO, Soomaaliya - Keydmedia Online jawaabeysa hadal heynta bulshada ee la isla dhex marayo kulanka berri ee lagu wado inuu ka dhaco xarunta Golaha Shacabka BJF ayaan waxaan xooraansanay hadal heynta ku aadan in kulanka berri muddo kordhin loogu sameeyo Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo.
Macluumaad is-khilaafsan ayaa laga helayaa Ajandaha kulanka berri, waxeyna Xildhibaanno la hadlay Keydmedia Online ay sheegayaan in ay shaki ka qabaan kulanka.
Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka BJFS oo lagu magacaabo Xildhibaan Maxamed Xassan Idiris ayaa bartiisa Facebook -ga ku soo qoray walaaca laga qabo in Guddoomiye Mursal uu hoosta ku wato qorshe ah in muddo kordhin loogu sameeyo Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo, waxa uuna yirin Xildhibaanku "Fariintaan waxaa ku dhex qarsoon fariin kale" oo uu ula jeedo Muddo Kororsi, waxa uuna u cabiray Xildhibaanku sidan "Hadii ujeedka uu yahay COVID-19 Golaha wuxuu leeyahay Hab-raacyo lasoo marsiiyo Ajendiyaasha ka hor inta aan Golaha la hor keenin, guddiga caafimaadka ayaa marka hore ka soo doodi lahaa, manajirto meel ay uga soo doodeen" .
Xildhibaan Maxamed Xasan Idir isagoo si gaara ula hadlaya Guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS waxa uu yiri "Guddoomiye Mursal waxaa muuqata inuu ku sii siqaayo taariikh mugdi ah! hadii uu berri halkaa la soo istaago muddo kororsi, kumana guuleeysan doono diiwaankana waa u geli doonta!"
Haddaba su'aasha isweydiinta badani waxay tahay maxaa sababay baqdinta laga qabi kari farriinta maanta loo diray Xildhibaanada Golaha Shacabka oo ay ku qorantahay in kulanka berri looga doodayo Caabuqa Covid-19?
KON Waxay isha ku haysaa halka ay baqdinta ka timid, horay waxaa u dhacday in fadhigii Golaha Shacabka ee BJFS ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa 25 July 2020 kaasoo Ajandihii looga hadlayay si deg-deg ah uu u baddalay Guddoomiye Maxamed Sh. Cabdiraxmaan Mursal, waxaana dood gaaban oo socotay muddo 7 daqiiqo ah kaddib xilkii ku waayay RW Xasan Cali Khayre oo 3 sano iyo lix bilood lasoo shaqeeynayay Madaxweyne Farmaajo.
Suurtagalnimada arrinta ay ku dhici karto aad ayey u yartahay, inkastoo Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka ay qabaan walaac ku aaddan in berri Muddo Kororsi loo sameyn doono madaxweyne Farmaajo, waxaa xusid mudan in saaxiibada koowaad ee dowladda Soomaaliya (Beesha Caalamka) ay ku celceliyeen in badan in aan la aqbali doonin Muddo Kororsi, doorasho hal dhinac ah, iyo mid bar-bar socota intaba.
Waxaa kale oo jirta in Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ay diidan yihiin jiritaanka Farmaajo, sidoo kale waxay horay u sheegeen in sharciyaddii hore ee uu Golaha Shacabka ansixiyay laga soo qaado wax-kama jiraan, maadaama uu dhacsan yahay Golaha, muddo xileedkiisana la dhaafay.
Si loo dareensiiyo dadka in Golaha Shacabka BJFS uu si caadi ah u qabsanayo fadhiyadiisa, doodna aan loo galin sharciyaddii uu meel mariyay darteed ayaa berri kulanka loo qaban doonaa, inkastoo aan si saxa loo hubin suurtagalnimada warkaasi.
Keydmedia Online ayaa waxaa horyaalla fariimaha loo diray qaar kamid ah Xildhibaanadda, laakiin wali jawaab kama aysan helin Xafiiska Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo aan ka codsanay xaqiijinta ajandaha berri ee Sabti.